Deg Deg: Farmaajo oo caawa kala baxay koontada Gobolka Banadir $820,000 - Muqdisho Online
Home Wararka Deg Deg: Farmaajo oo caawa kala baxay koontada Gobolka Banadir $820,000
Deg Deg: Farmaajo oo caawa kala baxay koontada Gobolka Banadir $820,000
Madaxweyne Farmaajo oo maanta ku soo laabtay Magaalada Muqadishu ayaa waxa uu isla caawa fiidkii amar ku bixiyay in qasnada Gobolka Banadir laga soo saaro lacag tiradeedu tahay $820,000. MOL ayaa waxaa loo xaqiijiyay in lacagtaas laga soo soosaaray qasnada Gobolka Banadir iyada oo boorsooyin lagu wado ayaa la geeyay hooyga uu Farmaajo ka jiifto Villa Soomaaliya.
MOL ayaa waxa kale oo ay xog ku heshay in dadka uu Farmaajo qaabilayay caawa uu ku jiray Generaal Caanood oo ay isku jufo ka soo jeedaan isla markaana u fuliyo qorshooyin gaar ah. Dad Xog’ogaal ah ayaa u sheegay MOL in maalinta berito ah diyaarad qaasa lagu qaadi doono qeyb ka mida lacagtaas iyada oo loo wado Gobolka Gedo.
Farmaajo ayaa ku doodayo in uu lacgtaas mushaar ahaan u uu siin doono ciidan uu ku sheegay in ay ku tabaaleysan yihiin Gobolka Gedo. Su’aashu waxa ay tahay maxaa keenay in habeen saq-dhexe lacag laga soo saaro Koontada Gobolka Banaadir? Maxaase keenay in Wasiirka Gaashaandhiga iyo taliyayaasha ciidanka laga qariyo lacagtaas? Waa maxay ujeedada rasmiga ee lacacgtaas uu caawa saq-dhexe uu Farmaajo ugala baxay Qasanada Gobolka Banadir.
Lacagta laga soo uruuriyo shacabka masaakiinta ee ku dhaqan Gobolka Banadir ayaa Farmaajo waxa uu u isticmalayaa in uu ku huriyo dagaal beeleedyo isla markaana uu beeshiisa ku hubeeyo.
Wixii ka soo kordho arintaan oo curud ah gadaal ayaan idinkaga soo sheegi doonaa.
Previous articleShirkadda Spectrum oo lacag joogta la siin jiray iyo DFS oo ka been abuurtay saamiga Soomaaliya (dhageyso)
Next articleGudoomiye Lagu dilay Muqdisho Iyo Wararkii ugu dambeeyay!!